Yiliphi ixoxo elingcono noma i-Islabike? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kwe-Islabike - izixazululo ze-pragmatic
Ukubuyekezwa kwe-Islabike - izixazululo ze-pragmatic
Yiliphi ixoxo elingcono noma i-Islabike?
I-IslabikesI-Cnoc 16 ibonakale sengathi ingalawuleka kancane kune-Ixoxo48; Inemizila emincane futhi ngaleyo ndlela iqondisa kancane. Ukuma okuqondile kokugibela kweCnoc, ngenxa yesibambo esiphezulu, kungenzeka kube yinto uMartha abonakala ebheka phambili kunokubheka phansi.
Amabhayisikili amabhalansi ayindlela enhle yokwenza izingane ezisacathula zihambe, futhi ziyisinyathelo sokuqala esifanelekile esiqonde ebhayisikili langempela. Izindaba ezimnandi ukuthi bangahamba ibanga elide futhi ngokushesha nje lapho imilenze yabo emincane ingashibilika ukuze bangabi kude kakhulu nawe, noma kukhona ukukhetha okukhulu kokuthile okungamabhayisikili amabili nesihlalo, futhi lapho kukhona izinto ezimbalwa ezibalulekile okufanele uzikhumbule lapho uthenga ibhayisikili lakho elilinganisiwe esizolungisa kamuva ngemuva kwamahora angama-30 okuhlolwa. Siphenye wonke amabhayisikili abhalansile emakethe, salalela imibono yabasebenzisi bakwaMumsnet, sathumela omunye wabahloli bethu ebaleka nengane yabo encane.
i-portland maine intaba yokuhamba ngebhayisikili
Sithuthukise amabhayisikili ayi-8 amahle kakhulu atholakala manje emakethe. ukukhanya okuhlukile, okubaluleke kakhulu ezinganeni ezisacathula, kepha nakubazali abazoyiphatha le nto, ubambe amathayi amakhulu okubamba ibhande kanye nebhuleki lesandla, okungasetshenziswa ngisho nayizandla ezincane, kunebanga leminyaka elinganiselwe, kwabanye abazali bayabeka kodwa bagcina inani labo futhi ungabathengisa njalo bese uthengela usayizi olandelayo isandla sesibili futhi konke sekuyibhayisikili elihle kakhulu, elilandelayo yiFrog Bikestadpole okungaphezulu kwebhalansi yesitayela sebhayisikili Ibhayisikili elenzelwe amandla nejubane uma uhlala ezweni noma unamava ngempelasonto futhi ujabulele imizila yomgwaqo, nokuyinto ezothinta nakanjani ibhayisikili elisele olithengayo. Lokhu kungaba inketho enhle kuwe.
Kubiza kakhulu futhi kusinda kancane kunabanye. Uma ufuna ibhayisikili elinama-aesthetics amaningi we-BMX ungabheki ngaphezu kwe-white Napier 2020 efanelekayo izingane ezineminyaka engu-2-4, kusho ukuthi igxila eminyakeni yobuntwana ngokunethezeka impela futhi yaqanjwa ngamabhayisikili kaChris Hoy iBMX aklanyelwe, ngokusobala iNapier icishe ibe namandla kunamanye amabhayisikili asemakethe, kodwa iqinile impela futhi ayinayo intengo esizokuklabisa ngayo. Isisindo sayo singu-2.9kg nje, iStrider 12 ngenye yamabhayisikili alula kakhulu esiwahlolile, futhi kuyindlela enhle yokuhamba ngebhayisikili eseceleni komgwaqo ngokukhishwa okusheshayo, ifreyimu encane ye-aluminium ezokwenza kube lula ukuthi ingane yakho ingene futhi icime , kanye ne-footrest esebenzayo ekhuthaza ukuhamba ngesikebhe okungathi sína.
IStrider yibhayisikili elakhiwe kahle, elilinganiselayo abazothanda izingane ezincane nabazali futhi lingasetshenziswa kusukela ezinyangeni eziyi-18 kuye eminyakeni emihlanu ubudala. Lokhu kuhlanganiswa okukhulu futhi kufanele nakanjani kubhekelwe lapho uthenga ibhayisikili elilinganiselayo. ICarrera Coast esinye isibonelo esihle sebhayisikili yebhalansi yesabelomali.
Inikeza izimbangi zayo ezibiza kakhulu ukugijima kwangempela kwemali yazo. Leli ibhayisikili elisebenziseka kalula elingagibela kalula ezindaweni ezahlukene nakubantu abasha, abazethembayo, uzothola isembozo ngakho, ukuthi kulula kangakanani ukuphula ibhayisikili kufanele ubheke ibhayisikili elilinganisiwe , futhi kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ibhuleki lesandla leCarreras Tech-Dro lidinga ingcindezi enhle, kodwa kukonke, iCarrera Coast ibhayisikili elihle kakhulu elinabhajethi abazali abaningi abazolithanda ngokulandelayo - ibhayisikili elilinganiselwe kakhulu elibukeka libhalansi Lunohlaka lwokhuni yakhiwe kahle ngokhuni lwe-birch olumeme kahle. Le modeli inamasondo ayizigaxa ahamba kalula phezu kwezinhlobo ezahlukene zezwe, kepha yenziwa ngokhuni okwenza kube nzima uma ingane yakho incanyana noma uma Unengane encane lokhu kungenzeka kungabi ibhayisikili elilula kakhulu kubo, ngakho-ke sincoma leli bhayisikili kusuka eminyakeni emithathu ubudala ezinganeni ezidinga ukuqinisa ukuzethemba kwazo ngenkathi zifunda ukugibela ibhayisikili.
Ifosholo likaRidgeback lingaba ngumnqobi wangempela wengane yakho uma lidinga ukwesekwa okwengeziwe, futhi ibhuleki lesandla lisho nokuthi kulula ukubhuleka, okufanele ukubhekelwe uma uhlala endaweni yasedolobheni. Leli bhayisikili lisohlangothini olusindayo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ilungele izingane ezineminyaka emithathu nangaphezulu, kodwa ibhayisikili elincane elihle futhi inendawo eningi yokukhula nayo. Ekugcineni sineMicrotwo-in - ibhayisikili elilinganiselayo elibhayisikili elilinganiselayo noma elingasetshenziswa njengebhayisikili elinamasondo okuqeqesha.
Leli bhayisikili nakanjani lizolanda usana lwakho kusuka ku-A kuye ku-B, kodwa lunamasondo amancane ngakho-ke kungcono impilo ezindleleni zomgwaqo noma ezindaweni ezishelelayo uma ucabanga ukuthi ingane yakho isendleleni Ukuze ube ngumgibeli ojwayelekile kunokuhamba ngebhayisikili elinganiselayo, iMicro Two-in-One mhlawumbe iyindlela engcono kakhulu kuwe, kepha ungakhohlwa ukubhalisa ukuze ungaphuthelwa yizo zonke izeluleko nezeluleko zokubuyekezwa komkhiqizo we-Mumsnet
Amabhayisikili Eseleube nenani elihle lokuthengiswa kabusha. Zingasetshenziswa yizingane eziningi kunokugcina ngokulahla udoti ngemuva kwezinyanga eziyisithupha. Ngakho-ke yize ungahle udinge ukusebenzisa imali ethe xaxa ekuqaleni ngeke ukwazi ukusebenzisa i-ibhayisikilingezelamani kodwa ngeke ube nenkinga ngokuthengisaitkuqhubeke ngemuva.8. 2020.
Isisindo se-Islabike sisisindo esingakanani?
Ukukhanya Okuhlanyayo. Ngaphansi kwamakhilogremu ayi-18, i-IslabikesI-Beinn 20 ikhanya ngokukhanyayo. Uma kuqhathaniswa namabhayisikili amaningi ezingane ongazithola esitolo samabhayisikili sendawo, iBeinn ilula kakhulu futhi kulula ukuyiphatha. Isibonelo, iTrek Precaliber 20,isisindoukushaya amakhilogremu angama-24.
Kungani ama-Islabikes mahle kangaka?
Izingane ziyathandaIslabikesngoba zenzelwe bona ngqo. Ama-handlebars, amabhuleki, ama-pedal kanye nama-gear lever konke kukalwe ngokucophelela ukulingana iminyaka yomgibeli webhayisikili. Amabhayisikili alula, angacoshwa kalula futhi akhonakakhulumanoeuvrable, okusho ukuthi ingane inayokuhlelawula njengoba zigibela. Futhi bazogibela.01.05.2021
Amabhayisikili Eseleyizingane ezingasindi ngokwedluleleamabhayisikiliokusho ukuthi zilula ezinganeni ezincane ukuziqondisa. Ikonangakho-kekubalulekile kubo lapho befunda ukuzizwa sengathi banokulawula. Kuzosiza ukwakha ukuzethemba kwabo ngokushesha okukhulu.
Ingabe isisindo sebhayisikili sibaluleke ngaphezu kwesisindo somzimba?
Iphuzu eliyinhloko: Ukulahlekelwaisisindo somzimbakuyintoOkuningikunenzuzokuneukulahlaisisindo sebhayisikiliekugibeleni okuthe xaxa. Kepha ngokushesha lapho umgwaqo ukhuphuka, kuyasiza ngokufanayo ukulahlekelwaibhayisikilifuthiisisindo somzimba, inqobo nje uma unamafutha ozowalahla.
Ngabe ama-Islabikes ake athengiswa?
Okwesibili,Islabikesungakwenzinjaloehlisa amabhayisikili abo amasha ngobuningiukuthengisaimicimbi. Ababambi iqhaza kwiBlack Friday, Cyber ​​Monday, Boxing DayUkuthengisa, Unyaka omushaUkuthengisa, njll, njll. Uma ufuna okusha shaIslabike, wena (imvamisa)unayoukukhokha isilinganiso sokuhamba.23.05.2021
Zenziwa kuphi ama-Islabike?
Islabikesivule ikomkhulu laseNyakatho Melika ePortland, e-Oregon futhi yaqala ukuthengisa ngo-Ephreli, 2013, kodwa yaphuma emakethe yase-US ngonyaka we-2018 ngenxa yokungaqiniseki ngemithetho yeBrexit ne-US. Amabhayisikili aklanyelwe e-UK futhikwenziwaeVietnam.
Ixoxo 55 lingakanani ubudala?
I-Ixoxo 55ibhayisikili lezingane ezisezingeni elifanele izinganeosekhulileIminyaka engu-6 kuya kwengu-8, neminyaka engama-20? usayizi wesondo.08.06.2021
Ngabe ixoxo 55 linamagiya?
Uma uyingane eneminyaka engama-6-7 ubudala kuyisinqumo esiphelele esingasindi. LokhuIxoxoIbhayisikili linesisindo se-featherweight 8.9kg. I-Ixoxo 55ifaka ama-8 speed Shimano trigger shiftamagiya, Amasondo angu-20 inch nohlaka olungu-11 inch. Ibhayisikili litholakala ngemibala engu-8 enesitayela.
Yikuphi ibhayisikili elihle kakhulu le-Islabikes ongalithenga?
Nakhu ukubuyekeza kwakhe okujulile kwebhayisikili lomgwaqo i-Islabikes Icons - uJanis. Ngenkathi ama-Islabike kade enebhayisikili labantu abadala ebangeni, iBeinn 29 esebenza ngezindlela eziningi, aziwa kakhulu ngamabhayisikili ezingane zabo zokulinganisa. Uhla lwezithonjana olusha lubhekiswe kolunye uhlangothi lobubanzi beminyaka: abangaphezu kweminyaka engama-65 abangayilungele i-e-bike.
Ngabe ama-Islabikes Luath ibhayisikili elihle lezingane?
Ikhwalithi yokwakha nokuklanywa okucabangayo kweLuath kuyenza ibhayisikili lezingane elihle kakhulu elinemisebenzi ehlukahlukene ngokwanele ongalisebenzisela ukuvakasha, ukuqala umjaho wezimoto noma ukugibela nje noMama & amp; Ubaba. Uma bekufanele ube nebhayisikili elilodwa kukho konke ukugibela, amathuba okuba ibhayisikili eliwela i-cyclo lingenza uhlu olufushane. Yilokho lokhu: ibhayisikili eliwela izingane.
Yayiyini inhloso yebhayisikili lakwa-Isla?
Islabikes ekusunguleni inhloso bekuwukuqalisa ukuqala kwezinguquko emabhayisikili ezingane. U-Isla wayecacile ukuthi ukukhiqiza amabhayisikili amakhulu wezingane kwakungeyona nje inkinga yokwehlisa ibhayisikili labantu abadala.